ကလေးများနှင့် သက်သတ်လွတ် အစားအစာ - Hello Sayarwon
နှလုံးနှင့် သွေးကြောရောဂါများ၊ ဆီးချိုသွေးချို၊ အဝလွန် ခြင်း စသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေအမျိုးမျိုး မဖြစ်အောင် လူများစွာသည် သတ်သတ်လွတ် အစားအစာများကို ရွေးချယ် ကြသည်။ အချို့က ပတ်ဝန်းကျင်၊ ယဉ်ကျေးမှု သို့မဟုတ် လူမျိုးရေး အကြောင်းရင်းများကြောင့် အသား၊ငါးများကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်။
ကလေးတွေ အတွက်ကရော ? ။ သတ်သတ်လွတ် အစားအစာသည် သူတို့အတွက် သင့်တော် ပါသလား။
သတ်သတ်လွတ် အစားအစာဆိုတာ ဘာလဲ။
သတ်သတ်လွတ် အစာ သုံးမျိုးကို အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားပါသည်။
Lacto-ovo vegetarians ဆိုသည်မှာ အသား၊ ငါး၊ ကြက်၊ဘဲ တို့ကို မစားခြင်းဖြစ်သည်။ နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲ၊ ဥများ၊ ပဲများ၊ အခွံမာသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ စသည်တို့မှ ပရိုတိန်း ရနိုင်သည်။
Lacto-vegetarian ဆိုသည်မှာ အသား၊ ငါး၊ ကြက်၊ ဘဲ နှင့် ဥများကို မစားခြင်း ဖြစ်သည်။ နို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲ စသော နို့ထွက် ပစ္စည်းများ၊ ပဲများ၊ အခွံမာသီးများ နှင့် အခြောက် အခြမ်း ပြုလုပ်ထားသော ပဲများမှ ပရိုတိန်း ရနိုင်သည်။
Vegans ဆိုသည်မှာ အမဲသား၊ ကြက်၊ဘဲ၊ ဥများနှင့် နို့ထွက် ပစ္စည်းများကို မစားခြင်းဖြစ်သည်။ ပဲများ၊ ပဲ အခြောက် အခြမ်းများ၊ အခွံမာသီးများနှင့် ပဲမှ ထုတ်သော ထုတ်ကုန်များမှ ပရိုတိန်း ရနိုင်သည်။ Vegan အစာသည် ပြင်းထန်သော အာဟာရ ပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် ကလေး များ အတွက် မသင့်တော်ပါ။
ကလေးများအတွက် သတ်သတ်လွတ် အစားအစာ
သတ်သတ်လွတ် အစားအစာပုံစံတွင် လုံလောက်သော မရှိမဖြစ် အာဟာရများ ပါဝင်ပါက ကလေးငယ်များ စားသုံး နိုင်သည်။
နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ အခွံမာသီး၊ ဥများ၊ ပဲထုတ်ကုန်များမှ ရရှိသော ပရိုတိန်း
အခြားသော ရင်းမြစ်များမှ ရသော အဆီ
နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုအတွက် စွမ်းအင်
ဗီတာမင်နှင့် သတ္ထုဓါတ်များ။ အထူးသဖြင့် ဗီတာမင် ဘီ ၁၂၊ ဗီတာမင် ဒီ နှင့် ကယ်စီယမ်။ သွေးအားနည်း ရောဂါ ကဲ့သို့သော သွေးရောဂါများ ကာကွယ်ရန် သံဓါတ်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
အစာများကို သင့်လျော်စွာ တွဲဖက်စားသုံးခြင်း။ အစာ များကို မှန်ကန်စွာ တွဲဖက်မစားပါက အာဟာရများကို စုပ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ကလေးများ၏ သတ်သတ်လွတ် အစားအစာတွင် မပါ မဖြစ် ပါရမည့် အစာများ
၁၂လအောက် ကလေးများကို နို့ ဆက်လက် တိုက်ရ မည်။
သင့်ကလေးကို အစာ အခဲများ စကျွေးသင့်သော အချိန်ကို ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
အမျှင်ဓါတ် စားသုံးမှုကို စောင့်ကြည့်ပါ။ အမျှင်ဓါတ် များစွာ စားခြင်းသည် zinc, သံဓါတ် နှင့် ကယ်စီယမ် စသော သတ္ထုဓါတ်များ စုပ်ယူမှုကို ခက်ခဲစေသည်။ ထို့အပြင် အမျှင် ဓါတ်သည် သင့်ကလေးကို ဗိုက်ဝသလို ခံစားစေနိုင်ပြီး လိုအပ်သော အစာပမာဏ မစားနိုင်အောင် တားဆီးနိုင်သည်။
သင့်ကလေးကို နေ့စဉ် အသီးအနှံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် မျိုးစုံ စားနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ အသီးအနှံ အနည်းငယ် နှစ် ကြိမ်နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် အနည်းငယ် သုံးကြိမ် ကျွေးရန် အကြံပြုလိုသည်။
ပဲဆီနှင့် ကန်နိုလာဆီသည် ကောင်းမွန်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော တစ်ရှူးများတွင် အရေးပါသော အခန်းမှ ပါဝင်သော linolenic acid ပါဝင်သည်။ ဆီများသည် စွမ်းအင်ရသော ရင်းမြစ်ကောင်းများ ဖြစ်သည်။
သင့်ကလေးအား သတ်သတ်လွတ် အစာကျွေးပါက အောက်ပါတို့ကို သတိရပါ။
ရွေးချယ်စရာ အာဟာရများအကြောင်း ကောင်းစွာ သိအောင်လုပ်ပါ။
သင့်ကလေးကို အစာမျိုးစုံ နှစ်သက်အောင် သင်ပေး ပါ။
အစာများကို မှန်ကန်စွာ တွဲဖက်စားသုံးပါ။
အခွံမာသီးများ၊ ထောပတ်သီး၊ နို့နှင့်နို့ထွက် ပစ္စည်း များကို အစာပြေအစာများတွင် ထပ်ပေါင်းခြင်း ဖြင့် အစာတွင်ပါဝင်သော စွမ်းအင်ကို မြှင့်တင်ပါ။
ကလေးများကို တင်းကျပ်သော အစာပုံစံဖြင့် မကျွေးသင့်ပါ။
လိုအပ်ပါက သို့မဟုတ် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားပါက ဖြည့်စွက်စာများ စားရန်စဉ်းစားပါ။
Vegetarian Diet and Children. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/vegetarian-diets-and-children Accessed April 18, 2017